0 Saturday January 09, 2021 - 21:42:27
Dhawaan waxaa lasoo gabagabeeyay dufcadii labaad ee macdahu Shariicakaas oo ay ka qalin jebiyeen arday gaaraysa ilaa 106 (boqol iyo lix) arday kuwaas oo dhamaystay waxbarashadii machadka.
0 Tuesday January 05, 2021 - 08:50:52
Xaflad heer sare ah oo lagu caleemo saarayay suldaan Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo loo doortay suldaanka Beesha Jareerweyne ee ku dhaqan Jubbooyinka ayaa ka dhacday deegaanka Booriini oo ah duleedka degmada Jamaame.
0 Monday January 04, 2021 - 08:00:20
Mu'asasada Alkataa'ib ayaa baahisay isdaar cusub oo ku saabsan weerarkii sanadkii hore lagu qaaday saldhigga ciidanka Mareykanka ee Manda Bay Kenya.
0 Wednesday December 30, 2020 - 10:39:52
Wilaayaatka Islaamiga dalka Soomaaliya waxaa si toos ah kaga socota qeybinta Zakada xoolaha nool taas oo ay si aad ah uga faa ideysanayaan kumanaan qoys oo isugu jirta Fuqaro iyo masaakiin.
0 Thursday December 17, 2020 - 19:33:00
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha magaalada Jilib ee Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayey beesha Xawaadle oo ka mid ah beelaha dega Jubbooyinka kusoo xiratay machad sharci ah.
0 Sunday December 13, 2020 - 17:35:43
Mu'asasada Alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa soo saartay isdaar Maqal oo muuqaal ah oo lagusoo bandhigayo weerarkii 14 Riverside ee sanaddii 2019 ka dhacay magaalada Nairobi.
0 Wednesday December 09, 2020 - 15:46:44
0 Saturday December 05, 2020 - 06:55:33
0 Tuesday December 01, 2020 - 12:26:45
Waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaan katirsan gobolka Mudug ee dhaca bartamaha Soomaaliya.
0 Monday November 16, 2020 - 13:48:32
Kaniisad kutaal magaalada Hargeysa ee xarunta gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya waxaa shalay lagu qabtay munaasabad loo sameeyay ciidamadii dowladda Ingiriiska uga dhintay dagaalkii koowaad ee adduunka.
0 Monday November 09, 2020 - 20:41:23
Boqolaal qof ayaa isugusoo baxay fagaare weyn oo kuyaal degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud dadkaas oo ka dhiidhinayay aflaagadadii ay gaalada Faransiiska ugeysteen nabiga SCW.
0 Sunday November 08, 2020 - 13:25:51
Fagaara weyn oo ku yaala degmada Galhareeri ee Wilaayada Islaamiga Galgaduud waxaa ka dhacay dibad bax ballaaran oo qeyb ka ah difaaca sharafka Nabigeena Muxamedصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ, Kaasi oo ay dhigeen bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga.
0 Friday November 06, 2020 - 16:40:25
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar naf hurnimo oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan katirsan gobolka Sh/hoose.
0 Tuesday November 03, 2020 - 13:13:33
Bulshada ku nool wilaayaadka Islaamiga ah ee Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa muujiyay sida ay diyaarka ugu yihiin in ay naftooda ku bixinayaan difaaca Sharafta Nabiga SCW.
0 Wednesday October 28, 2020 - 21:28:35
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka Buurdhuxulle ee gobolka Bakool ayaa xarigga looga jaray qeybta koowaad ee Masjid jaamacada deegaanka.
0 Sunday October 11, 2020 - 16:12:59
Xaflad ballaaran oo ka dhacday degmada Moqokori ee Wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa lagu caleema saaray nabadoonka Jufada Xasan Muuse ee beelweynta Xawaadle.
0 Sunday October 11, 2020 - 08:13:18
Xoogag Jihaadiga ah ee ka halgama wadamo katirsan galbeedka qaaradda Afrika ayaa udabaaldegay sii daysmada boqolaal maxaabiis mujaahidiin ah oo dhowaan lagasii daayay xabsiyada cadowga.
0 Tuesday October 06, 2020 - 06:13:47
Xaflad heer sare ah oo dhawaan ka dhacday deegaanka Burdho ee gobolka Bakool waxaa isugu yimid masuuliyiin ka kala socday wilaayaadka Baay iyo Bakool iyo Hiiraan iyo waxgaradka beelaha Gaaljecel iyo Gelidle iyo nabaddoono ka socday labada wilaayo, waxaana ujeedka shirkaasu ahaa in lagu kala wareego…
0 Sunday October 04, 2020 - 20:23:55
Wali waxa si dardar leh uga socda wilaayada Jubbooyinka caleemo saarka salaadiinta dhaqanka ee beelaha dega wilaayada, waxana todobaadkanla caleemo saaray suldaanka Jubbooyinka u qaabilsan beesha sade oo loo doortay Cabdiwali Xasan Madoobe.
0 Monday September 28, 2020 - 19:45:45
Xafladani oo aheyd mid si weyn loo soo agaasimay laguna caleemasaarayay suldaan C/fataax Xasan Maxamed Suldaanka beesha Mudulood ee Jubbooyinka ayaa dhawaan waxay ka dhacday degmada Jilib.
0 Monday September 14, 2020 - 12:36:05
Xaalad deganaan ah ayaa laga dareemayaa deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka magaalada Kismaayo halkaas oo isbuucii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo iyo qaraxyo khasaara dhaliyay.
0 Sunday September 13, 2020 - 10:53:50
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in diyaarad nuuca basaaska ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka ay kusoo dhacday meel ku dhow magaalada Kismaayo.
0 Sunday August 23, 2020 - 20:47:48
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu caleemo saarayay suldaan cusub oo ay yeelanayso beesha Boqolhore ayaa dhawaan ka dhacday deegaanka Dalandoole ee gudaha wilaayada Bay iyo Bakool.
0 Wednesday August 19, 2020 - 13:47:28
Muuqaalkan Cajiibka ah waxaa faafisay Mu'asasada Alkataa'ib wuxuuna soo bandhigayaa weerarkii lagu xasuuqay ciidamada Itoobiya ee ka dhacay wadada u dhexeysa Buurhakaba iyo Baydhabo.
0 Thursday August 13, 2020 - 08:45:21
Degmada Saakow ee katirsan degmooyinka uu maro wabiga Jubba waxaa shalay lagu dilay Jabiso taas oo loo maleynayay in ay dad ama xoolo cuntay laakin markii la dooxay caloosheeda ayaa waxaa lagu arkay Ey.
0 Wednesday August 12, 2020 - 13:10:35
0 Wednesday August 05, 2020 - 10:18:48
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo halaag daran ka dhaliyay oo xalay ka dhacay magaalada Beyrut ee caasimadda u ah wadanka Lubnaan.
0 Monday August 03, 2020 - 12:29:24
Wilaayaatka Islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa lagusoo gaba gabeeyay fantasyaha maamulka Ciidul Adxaa.
0 Saturday August 01, 2020 - 13:35:52
Fagaara wayn oo kuyaal magaalada Ceelbuur ee Wilaayada Islaamiga Galgudud waxaa ka dhacay mahrajaan islaami ah oo ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga Galguduud.
0 Friday July 31, 2020 - 17:37:10
Kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan degmada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada dhexe ayaa udabaal degay maalinta koowaad ee munaasabadda Ciidul Adxaa.
0 Friday July 31, 2020 - 14:40:42
Bulshada ku nool degmada Jilib ayaa saaka si wayn isugu soo baxay fagaaraha wayn ee Macallin Aadan Xaashi Ceyroow loogu magac daray, fagaarahaasi oo ku caanbaxay salaadaha ciidda iyo fulinta xuduudaha sharciga ah.
0 Friday July 31, 2020 - 12:15:49
Magaalada Buq Aqablle ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya ayaa kamid ah meelaha sida aadka ah looga dabaal degay munaasabadda Barakeysan ee Ciidul Adxaa, kumanaan qof ayaa fagaaraha weyn ee magaalada ku tukaday.
0 Wednesday July 29, 2020 - 17:51:40
Diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa maanta duhurkii duqayn ka fuliyay magaalada Jilib ee Wilaayada Jubbooyinka halkaas oo ay ku dileen carruur kuna burburiyeen guri.
0 Wednesday July 15, 2020 - 11:36:49
Dagaallo dad badan ay ku dhinteen ayaa lagasoo sheegayaa gobollada wadanka Itoobiya xilli melleteriga wadankaas ay sii wadaan holwgallada ka dhanka ah kooxaha mucaaradka ah.
03/12/2020 - 18:41:15
Maamullada 'Puntland' iyo 'Jubbaland' oo mucaaraday guddiga doorashooyinka ee dowladda Farmaajo.
29/11/2020 - 16:41:17